Matongerwo eNyika, 01 Kurume 2018 page 1
China 1 Kurume 2018
Vanhu Vogara seVaranda kwaMarange Kuri Kucherwa Mangoda neHurumende
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare neChipiri, vamwe vagari vekunzvimbo iyi vanoti vari kutyorerwa kodzero dzavo zvakanyanya, kushungurudzwa pamwe nekuurayirwa hama dzavo.
Zimbabwe iri kutarisirwa gore rino kuwana mari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe nemasere kubva pabhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu gore rapera.
Bato reTransform Zimbabwe Rotanga Gadziriro yeKongiresi Yaro Yekutanga
Bato rinopikisa reTransform Zimbabwe mukupera kwesvondo rakaita musangano wenhengo dzaro wekuronga nezve kongiresi yebato iri yekutanga iyo iri kutarisirwa kuitwa mwedzi unouya.
Amai Mujuru Vokurudzira VaMnangagwa Kuti Vagadzirise Zvinetswa Sarudzo Dzisati Dzasvika
Mutungamiri webato rinopikisa reNationa People’s Party, Amai Joice Mujuru, vanonzi neChishanu chapfuura vakanyorera mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa gwaro rino zvinyunyuto zvine chekuita nesarudzo zvavanoti zvinofanirwa kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa.
Sarudzo Dzinotarisirwa Kuitwa Muna Chikumi Kana Chikunguru
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission, Amai Priscilla Chigumba, vanoti sarudzo dzichaitwa pakati pa21 Chikumi na 21 Chikunguru.
Vaimbova Mumiriri weAmerica VaRay Votaura nezveNguva Yavaigara muZimbabwe
Zimbabwe yasangana neshanduko dzakasiyana siyana munyaya dzezvematongewro enyika mumakore apfuura.
Vadzidzi vepaNUST Makumi Matanhatu neMumwe Vosungwa Mushure Mekuratidzira
Mapurisa nemusi weMuvhuro akasunga vadzidzi vepaNational University of Science and Technology kuBulawayo vane chitsama mushure mekunge varatidzira nekuvharira vanhu kuti vasapinda kana kubuda pachikoro ichi.
Election Resource Centre, Vinoti Zimbabwe Electoral Commission inofanirwa kuchikasika kuburitsa gwaro rinoratidza mafambisirwo achaitwa zvinhu kusvika musarudzo, sezvo nyaya yanga iri kumatare edzimhosva yakanzwikwa.
MDC Yoshora Mashoko eKuti VaChamisa Vanoda Kusungwa
Mutevedzeri wemutauriri weMDC-T Muzvare Thabitha Khumalo vanoti vari kushamisika nemashoko ari mubepanhau reSunday Mail rekuti mapurisa anoda kusunga vakafanobata chigaro chemutungamiri webato ravo VaNelson Chamisa